Wararka Maanta: Jimco, May 4 , 2012-Human Rights Watch oo soo bandhigtay tacadiyada ay ciidamada Kenya ku hayaan qaxootiga Soomaalida
Jimco, May 04, 2012 (HOL) - Hay’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo maantay soo bandhigtay warbixinteeda sannadlaha ah ayaa sheegtay in tacadiyo xoog leh ay ciidamada Kenya u gaystaan dadka qaxootiga ah ee Soomaalida ah.
Human Rights Watch ayaa sheegtay in xadgudubyada ugu badan ay ka dhacaan xuduuda ay wadagaan Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo ciidamada Kenya ay tacadiyo u gaystaan dadka Soomaalida ah iyagoo ka jawaabaya weerarada uga yimaada kooxaha maleeshiyaadka ah.
Mid kamid ah kiisaska ay Human Rights Watch soo bandhigtay ayaa ka sheekaynaysa gabar Soomaaliya oo uu kufsaday askari Kenyaati ah, taasoo ka dhacday xerada qaxootiga ee Dhadhaab xilli ay ciidamada Kenya hawlgal ka fulinayeen halkaas bishii December ee sannadkii 2011ka.
Human Rights Watch ayaa warbixinteeda kaga hadashay in ciidamada Kenya ay dadka qaxootiga ah kula kacaan falal isugu jira kufsi,dhac iyo waliba jirdil.
Waxaana ay hay’adu sheegtay in dawladda Kenya ay u saartay guddi baaritaan ku sameeya tacadiyada lagu eedaynayo ciidankooda.
Human Rights Watch oo maanta warbixintan ku soo bandhigtay magaalada Nairobi ayaa ka digtay sii socoshada gabood fallada ka dhanka ah xuquuqda bini’aadamka iyo tacadiyada ay ciidamada Kenya u gaystaan dadka qaxootiga ah, gaar ahaanna xilliyada ay socdaan hawlgallada lagu baadi goobayo kooxaha looga shakisanyahay inay fuliyaan weerarada ka dhanka ciidamada ammaanka ee Kenya.
Dawlada Kenya wali wax jawaab ah kama bixin eedaymaha loo soo jeediyay ciidankeeda, balse warbixin noocaan oo kale oo sannadkii hore ay Human Rights Watch soo bandhigtay ayay dawladu sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto askarta sameeya ficillo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.